China Dongshen okomoko adịchaghị mma na-enweghị eriri eriri sịntetik ntutu resin na-ejikwa akara ngosi ihu ihu mmiri ahịhịa na-emepụta ihe na onye na-eweta ngwaahịa | Dongmei
Dongshen okomoko adịchaghị mma na-enweghị eriri eriri sịntetik ntutu resin na-ejikwa akara ngosi ihu ihu ahịhịa ahịhịa
Ahịhịa ịcha afụ ọnụ Dongshen bụ nke ejiri ntutu sịntetik eke na aka resin mee. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị.
Akụrụ ọnụ ihe Ntutu isi
Jikwaa ụcha White, black, red, green, silver, gold, streak, ect… ma ọ bụ rụpụta dịka arịrịọ ndị ahịa si dị
- AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKW: KWỌ: A na -eji ahịhịa resin siri ike mee ahịhịa ahịhịa a na -acha anụnụ anụnụ ka ọ jeere gị ozi ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụ karịa.
- IKPERE OZI OZI: Ahịhịa ajị ajị a dị oke oke ma dị nro nke ga -adị gị mma n'ahụ mgbe ị ka na -arụ ọrụ ahụ. Na -ebute mmiri n'ihu maka ịkpụ afụ mmiri n'ezie. Brọsh ịkpụ afụ ọnụ maka ụmụ nwoke na -emepụta ọmarịcha ahịhịa na -ekpo ọkụ, na -enye gị ahụmịhe ịkpụ afụ ọnụ.
- Mfe ma dị mma iji: Ncha ahịhịa a dị nro nke ukwuu ma na -ele anya; ahịhịa ịkpụ afụ nwere ụdị ergonomic nke na -eme ka ijide dị mma; Ezigbo nha maka aka niile.
- Zuru oke dị ka onyinye: obere brushes ịkpụ afụ ọnụ a mara mma maka ụmụ nwoke ga -abụ ezigbo onyinye maka nwoke ọ bụla ma ọ bụ nwoke na ndụ gị.
- ỌRỤ MAKA ire ere: Anyị nwere obi ike na ịdị mma nke ịcha afụ ọnụ anyị. Mana ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju maka ngwaahịa a maka ihe ọ bụla, biko nweere onwe gị ịrịọ anyị n'oge ọ bụla!
Otu esi akpụ isi:
1.See mmiri ọkụ na -akpụ isi.
2.Tee akwa nhicha mmiri na -ekpo ọkụ n'ihu gị, mee ka akpụkpọ ahụ gị dị nro ma mee ka mgbọrọgwụ ajị agba dị nro.
3. Jiri ahịhịa na -akpụcha afụ ọnụ iji tinye ụfụfụ ncha ncha n'ihu gị.
4.Sịpụ afụ ọnụ gị site na akụkụ mkpuchi dị oke obere ruo na akụkụ okpu, ka akụkụ ahụ buru ibu wee nwekwuo oge iji mee ka ọ dị nro.
5.Sacha ihu gị, jiri mmiri ọkụ hichaa ahịhịa na -akpụ isi gị ma debe ya na njide afụ ọnụ ka ọ kpọọ nkụ nke ọma maka ogologo ndụ.
Ntuziaka maka ojiji:
1. Jiri mmiri ọkụ were ahịhịa saa ahịhịa ahụ nke ọma.
2. Emekwala ka ahịhịa gbaa ogologo oge.
3. Ejila ihe nchacha ma ọ bụ ihe ncha siri ike - mmiri zuru oke.
Nke gara aga: Dongshen na -akpụcha ahịhịa kacha mma baajị ntutu na -acha anụnụ anụnụ resin na -ejikwa akara nkeonwe nha nha ahịhịa ụmụ nwoke
Osote: Dongshen ahịhịa okomoko eke rụrụ rụrụ dị ọcha badger ntutu resin na -ejikwa akara ịkpụ afụ ọnụ iji mee ka ajị ihu dị nro
Nchacha Logo omenala
Resin Aka ịkpụcha ahịhịa
Nchacha ahịhịa resin
Nchacha ịchacha sịntetik
Ahịhịa ahịhịa ahịhịa anaghị eri anụ
Dongshen adụ akpụkpọ-enyi na enyi sịntetik ntutu osisi ...
Dongshen N'ogbe High Quality Private Label B ...
Dongshen ahịhịa okomoko eke rụrụ dị ọcha badger ...
Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Nịm etemeete ahịhịa,